SOMALITALK - SWIDZERLAND
Banaanbixii Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland
Sabtidii oo aay taariikhdu tahay 13.01.2007, ayey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland ku qabatay xarunta qaramada midoobay ee Geneva horteeda bananbax weyn oo looga soo horjeedo qabsashada itoobiya ee Soomaaliya iyo weerarada dhulka iyo cirka ee lagu hayo shacbiga ku dhaqan dagmooyin badan oo ka tirsan J/Hoose ee koonfurta Soomaaliya iyada oo lagu marmar siyoonayo argagixisa ayaan raadinaynaa.
Dadkii banaanbaxan isugu soo baxay oo qaarkood aay ilmiinayeen ayaa dhamaantood ka sinaa xumaanta aay ka xunyihiin in maanta wadankeenii xorta ahaa uu gumeysiga itoobiya gacanta ugu jiro oo aayan sahal uga baxaynin iyo xasuuqa deegaanada Soomaaliyeed min Dhoobleey ilaa Raaskambooni.
Banaanbaxayaashu waxay ku dhawaaqayeen hal ku dhagyo lid ku ah joogitaanka ciidamada shisheeye ee wadankeena iyo in uu maraykanku joojiyo is la markaana magdhaw ka bixiyo xasuuqa uu ka geeystay koonfurta soomaaliya.
Intii uu socday banaanbaxa ayaa dadkii dhalinta yaraa waxay fursan u heleen in aay dhageestaan warbixino taariikhi ah oo aay soo jeedinayeen odoyaal ruug cadaa ah oo qaarkood aay ka mid ahaan jireen baarlamaankii rayidka ahaa ee ka horeeyay dowladii kacaanka ahayd.
Odoyaashu waxay ku boorinayeen ummadda in lala yimaado midnimo soomaaliyeed si looga baxo dhibaatada dalka iyo dadka ku dhacday, sidoo kalana waxay sheegeen in aan dowlad lagu noqon karin ayadoo aay ku ilaalinayso ciidamo shisheeye.
Weey dhici kartaa in dal uu cadowgiisu qabsado laakiin kuma waaro taasna taariikhda ayaa marqaati ka ah ayay yiraahdeen.
Ugu danbeeyntii waxay xubnaha Jaaliyadda Ilaah ka baryayaan in uu Alle dowladnimadeenii iyo jiritaankeenii noo soo celiyo isla markaana uu awooda dalka gacanta u galiyo kuwa dalka iyo dalkaba ka naxa.
Warbixin dheeraad ah hoos ka akhri....
Bannaabax ballaaran oo looga soo horjeeday joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya iyo weerarada gardarada ah ee ay ciidamada mareykanka iyo kuwa Itoobiya ku hayaan koofurta Soomaaliya ayaa maalintii sebtida aheyd ka dhacay magaalada Geneva ee dalka switzerland. Bannaabaxaas oo ay kasoo qeyb qaleen dadweyne aad u fara badan oo isugu jiray haweenka, culimada, aqoonyahannada, waxgaradka, cuqaasha, dhalinyarada iyo carruurta soomaaliyeed ee ku nool wadanka Switzerland kuwaasoo ka kala yimid gobolada dalka.
Bannaanbaxa ayaa waxaa uu ka billowday kasoo horjeedka xafiiska UN ka ama qaramada midoobay ay ku leedahay dalka switzerland ee GENEVA. Dadkii halkaas isugu soo baxay ayaa waxey ku dhawaaqayeen ereyo ay kaga soo horjeedaan joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya iyo gardarada qaawan ee ay ciidamada mareykanku ku baabi�nayaan shacabka soomaaliyeed. Bannaanbaxayaasha ayaa waxey tageen xafiiska midowga Europe iyadoo qabanqaabiyeyaasha bannaanbaxa ay halkaas kula kulmeen Ergey gaar ah oo ay qaramada midooway u xilsaartay loona gudbiyay qoraalo ku aadan banaanbaxa asagoo u balanqaaday inuu farriintooda gaarsiin doono madaxda ugu sarreysa Ururka Qaramada midoobey una gudbiyeen bayaan dheer oo aan kasoo qaadan karno arimaha soo socda:
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland waxey cambaareyn kulul dusha uga tuuraysaa dhammaan hawlgallada melleteri ee ka dhacaya wadanka soomaaliya, waxeyna soo jeedineysaa inaan xoog waxba lagu xalli karin ee wadada kaliya ee lagu gaari karo nabadda iyo horumarka ay tahay miiska wadahalka iney isugu yimaadaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed.
Bannaanbaxaas ayaa waxaa ka hadlay odayaal, siyaasiyiin, waxgarad oo ay ka mid ahaayeen 1)Maxamuud xasan cabdi 2)Aadan ibrahin 3)x.Axmed x c/raxman, iyo dad badan oo run ahaantii shucuurtooda wadaniyad aad u kacsaneyd maadaama lagu xadgudbay shucuurdii caalamiga iyo kuwii dalka.
Waxaa lagu soo gunaananay abaahiriii 16H00 galabnimo laguna balamay in lasii wadi doono kacdoonkaan oo kale ee lagu doonayo in soomaaliya xornimadeeda iyo madaxbanaanideeda laxaqiijiyo.
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 14, 2007
Akhri: Wararkii Jan 13, 2007::
Ururka Al-Islaax oo maanta soo saaray warsaxaafadeed ku aaddan duqeynta Mareykanku